Salovanin’ny fanjakana foibe ny asan’ny kaominina ka tsy omena vola sy atao fahirano mihitsy ny mpitantana ny renivohitra. Salovanin’ny fanjakana amin’ny alalan’ilay programa ambara ho tetikasan’ny filoham-pirenena izay asa tokony hataon’ny kaominina toy ny fanamboaran-dalana, zaridaina ... Mitazam-potsiny anefa ny fanjakana manoloana ny fikorontanan’ny tanàn-dehibe ka dia miady irery ny mpitantana ny renivohitra. Efa tena hamaivanin’ny fitondrana ny fahefan’ny ben’ny tanàna ary porofon’izany ny tsy fanomezana hasina an-dRtoa Lalao Ravalomanana nandritra ny fivorian’ny Comesa izay nanaovana vava be hoe asehoy aloha ny “invitation”. Nisy ny fiara tsy manara-dalàna notazonina teny Anosipatrana ary milisy mitam-piadiana nalefan’ny fanjakana no namoaka izany an-keriny teny an-toerana sady tamin’ny andro alina. Izao indray dia miaramilan’ny Capsat sy ny RAS no tonga manafika ny CUA fa hoe nisy vadina miaramila voadaroka. Mivoaka ny feo fa minisitra no nanome baiko hoe mandehana faizo kely aloha ny kaominina. Ny resaka varotra amoron-dalana dia tsikaritra ho feno mpikarama an’ady ary ahiana ho ny mpitondra ihany no manakarama azy ireny. Kotrehina ny paikady maloto isan-karazany ka korontanina, tsy omena vola, hanaovana tsindry isan-karazany ary tsy avela miasa tsara ny kaominina. Kendrena izay hampatezitra ny vahoaka amin’i Lalao Ravalomanana ka tsy hanohana azy intsony ary dia hosoloina Prezidan’ny delegasionina manokana na PDS ny tenany aorian’izay ka hambara fa tsy mahavita azy. Kendrena amin’izany ny hampihena ny lanja ara-politikan’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) rehefa tsy ben’ny tanàna intsony i Lalao Ravalomanana. Efa nisy fotoana rahateo saika nosoloina PDS ny tenany fa tsy tanteraka izany. Vao mainka maharomotra ny fanjakana foibe ny naha lasa mpanolotsaina manokana an’i Marc Ravalomanana. Atahoran’ny HVM rahateo izy sy ny antoko TIM tarihiny ka ezahina ny hanapotehana azy dieny izao. Anisan’izany ny fanalana ny tanànan’Antananarivo tsy ho olona avy amin’ny antokon’ny filoha teo aloha no hitantana azy.